ဤသည်မှာ အာရှတိုက်ရှိ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံများနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေများ စာရင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာရင်းတွင် အပြည်အဝအသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံများ၊ အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ အသိအမှတ်ပြုထားသော နိုင်ငံများ၊ အာရှနှင့် အာရှမဟုတ်သော အမှီအခိုနယ်မြေများ ပါဝင်သည်။ ဤစာရင်း၌ အသိအမှတ်ပြုအချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ ၄၉ နိုင်ငံ(အားလုံးမှာ ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများဖြစ်)၊ အကန့်အသတ်ရှိသောလည်း တောင့်တင်းခိုင်မာသော၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုရှိသော de-facto နိုင်ငံ ၂ နိုင်ငံ(ဤအထဲမှ တစ်နိုင်ငံသည် ကုလသမဂ္ဂ၏ လေ့လာသူနိုင်ငံဖြစ်)၊ အကြီးအကျယ်အသိအမှတ်ပြုမှုမရှိသည့် de-facto နိုင်ငံ ၄ နိုင်ငံနှင့် အမှီအခိုနယ်မြေ ၆ ခုနှင့် အခြားသော နယ်မြေများအား စာရင်းပြုစုထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာ၌ အသိအမှတ်ပြု အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ ၄၉ နိုင်ငံထဲမှ နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံသည် ဥရောပနှင့် အာဖရိကနိုင်ငံများအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော်လည်း ထိုနိုင်ငံများ၏ ပိုင်နက်အစိတ်အပိုင်းများသည် အာရှထဲတွင် တည်ရှိ၍နေသည်။ ရုရှားနိုင်ငံ၏ ဧရိယာအများစုသည် အာရှတိုက်ထဲတွင် ရှိသော်ငြားလည်း မြို့တော် မော်စကိုနှင့် ဥရောပဘက်ခြမ်းရှိ များပြားသော လူဦးရေအရ ဥရောပနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသည်။ အီဂျစ်နိုင်ငံ၏ အာဖရိကတိုက်ရှိ ပထဝီဝင်ဧရိယာနှင့် လူဦးရေအရ အာဖရိနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော်ငြား အီဂျစ်သည် ဆိုင်းနိုင်းကျွန်းဆွယ်မှာတဆင့် အာရှတိုက်အတွင်းသို့ တိုးဝင်တည်ရှိနေသည်။
မြန်မာအက္ခရာစဉ်ဖြင့် စီထားသော နိုင်ငံအမည်နှင့် တရားဝင်နိုင်ငံအမည်
ဒေသတွင်း အတိုကောတ်နာမည်နှင့် တရားဝင်အမည်
ကမ္ဘောဒီးယား ဘုရင့်နိုင်ငံ ခမာ: កម្ពុជា — ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា (Kâmpŭchéa — Preăhréachéanachâkr Kâmpŭchéa) ဖနွမ်းပင်မြို့
ခမာ: ភ្នំពេញ (Phnum Pénh) ၁၄,၉၅၂,၆၆၅ 00181035 !၁၈၁,၀၃၅ km2 (၆၉,၈၉၈ sq mi)
ကာဂျစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကာဂျစ်: Кыргызстан — Кыргыз Республикасы (Kyrgyzstan — Kyrgyz Respublikasy)
ရုရှား: Кыргызстан — Кыргызская Республика (Kyrgyzstan — Kyrgyzskaja Respublika) ဘီရှကက်မြို့
ကာဂျစ်: Бишкек (Bishkek)
ရုရှား: Бишкек (Biškek) ၅,၄၉၆,၇၃၇ 00199951 !၁၉၉,၉၅၁ km2 (၇၇,၂၀၂ sq mi)
ကာဇက်စတန် သမ္မတနိုင်ငံ ကာဇက်: Қазақстан — Қазақстан Республикасы (Qazaqstan — Qazaqstan Respūblīkasy)
ရုရှား: Казахстан — Республика Казахстан (Kazahstan — Respublika Kazahstan) အာစတာနာမြို့
ရုရှား: Астана (Astana) ၁၇,၅၂၂,၀၁၀ 02724900 !၂,၇၂၄,၉၀၀ km2 (၁,၀၅၂,၀၉၀ sq mi)
အာရပ်: قطر — دولة قطر (Qatar — Dawlat Qatar) ဒိုဟာမြို့
အာရပ်: الدوحة (Ad Dawḩah) ၂,၃၃၄,၀၂၉ 00011586 !၁၁,၅၈၆ km2 (၄,၄၇၃ sq mi)
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ ကိုရီးယား: 한국 — 대한민국 (Hanguk — Daehan Minguk) ဆိုးလ်မြို့
ကိုရီးယား: 서울 (Seoul) ၅၁,၄၄၆,၂၀၁ 00099720 !၉၉,၇၂၀ km2 (၃၈,၅၀၂ sq mi)
ကိုရီးယား ဒီမိုကရက်တစ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကိုရီးယား: 조선 — 조선민주주의인민공화국 (Chosŏn — Chosŏn-minjujuŭi-inmin-konghwaguk) ပြုံယမ်းမြို့
ကိုရီးယား: 평양 (Phyŏngyang) ၂၄,၅၈၉,၁၂၂ 00120538 !၁၂၀,၅၃၈ km2 (၄၆,၅၄၀ sq mi)
အာရပ်: دولة الكويت — اﻟﻜﻮﻳت (Al Kuwayt — Dawlat al Kuwayt) ကူဝိတ်မြို့
အာရပ်: الكويت (Al Kuwayt) ၃,၂၆၈,၄၃၁ 00017818 !၁၇,၈၁၈ km2 (၆,၈၈၀ sq mi)
ဂျပန်နိုင်ငံ ဂျပန်: 日本 — 日本国 (Nihon / Nippon — Nihon-koku / Nippon-koku) တိုကျိုမြို့
ဂျပန်: 東京 (Tōkyō) ၁၂၇,၃၆၈,၀၈၈ 00377915 !၃၇၇,၉၁၅ km2 (၁၄၅,၉၁၄ sq mi)
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ[a][b] ဂျော်ဂျီယာ: საქართველო (Sak'art'velo) တဘီလီဆီမြို့
ဂျော်ဂျီယာ: თბილისი (T'bilisi) ၄,၅၇၀,၉၃၄ 00069700 !၆၉,၇၀၀ km2 (၂၆,၉၁၁ sq mi)
ဂျော်ဒန် ဟာရှီမိုက် ဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: اﻷرُدن — المملكة الأردنية الهاشميه (Al Urdun — Al Mamlakah al Urdunīyah al Hāshimīyah) အမ်မန်မြို့
အာရပ်: عمان (Ammān) ၆,၅၀၈,၈၈၇ 00089342 !၈၉,၃၄၂ km2 (၃၄,၄၉၅ sq mi)
စင်ကာပူသမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်: 新加坡 — 新加坡共和国 (Xīnjiāpō — Xīnjiāpō Gònghéguó)
အင်္ဂလိပ်: Singapore — Republic of Singapore
မလေး: Singapura — Republik Singapura
တမီးလ်: சிங்கப்பூர் — சிங்கப்பூர் குடியரசு (Chiṅkappūr — Chiṅkappūr Kuṭiyarachu) စင်ကာပူ
တရုတ်: 新加坡 (Xīnjiāpō)
တမီးလ်: சிங்கப்பூர் (Chiṅkappūr) ၅,၃၅၃,၄၉၄ 00000697 !၆၉၇ km2 (၂၆၉ sq mi)
ဆိုက်ပရပ်စ် သမ္မတနိုင်ငံ ဂရိ: Κύπρος — Κυπριακή Δημοκρατία (Kýpros — Kypriakí Dimokratía)
တူရကီ: Kıbrıs — Kıbrıs Cumhuriyeti နီကိုဆီးယားမြို့
ဂရိ: Λευκωσία (Lefkosia)
တူရကီ: Lefkoşa ၁,၁၃၈,၀၇၁ 00009251 !၉,၂၅၁ km2 (၃,၅၇၂ sq mi)
ဆီးရီးယား အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: سورية / سوريا — الجمهورية العربية السورية (Sūrīyah / Sūriyā — Al Jumhūrīyah al ‘Arabīyah as Sūrīyah) ဒမားစကပ်မြို့
အာရပ်: دمشق (Dimashq) ၂၂,၅၃၀,၇၄၆ 00185180 !၁၈၅,၁၈၀ km2 (၇၁,၄၉၈ sq mi)
ဆော်ဒီအာရေဗျဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: السعودية — المملكة العربية السعودية (As Su‘ūdīya — Al Mamlakah al ‘Arabīyah as Su‘ūdīyah) ရီယာ့ဒ်မြို့
အာရပ်: الرياض (Ar Riyāḑ) ၃၁,၅၂၁,၄၁၈ 02149690 !၂,၁၄၉,၆၉၀ km2 (၈၃၀,၀၀၀ sq mi)
တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်: 中国 — 中华人民共和国 (Zhōngguó — Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) ပေကျင်းမြို့
တရုတ်: 北京 (Běijīng) ၁,၃၄၃,၂၃၉,၉၂၃ 09596961 !၉,၅၉၆,၉၆၁ km2 (၃,၇၀၅,၄၀၇ sq mi)
တာ့ခ်မင်နစ္စတန်နိုင်ငံ Turkmen: Türkmenistan အက်ရှ်ဂဘတ်မြို့
Turkmen: Aşgabat ၅,၀၅၄,၈၂၈ 00488100 !၄၈၈,၁၀၀ km2 (၁၈၈,၄၅၆ sq mi)
တာဂျစ်ကစ္စတန် သမ္မတနိုင်ငံ Tajik: Тоҷикистон — Ҷумҳурии Тоҷикистон (Tojikiston — Jumhurii Tojikiston) ဒူရှန်ဘဲမြို့
Tajik: Душанбе (Dushanbe) ၇,၇၆၈,၃၈၅ 00143100 !၁၄၃,၁၀၀ km2 (၅၅,၂၅၁ sq mi)
အရှေ့တီမောဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ပေါ်တူဂီ: Timor-Leste — República Democrática de Timor-Leste
Tetum: Timor Lorosa'e — Repúblika Demokrátika Timor Lorosa'e ဒီလီမြို့
Tetum: Dili ၁,၁၄၃,၆၆၇ 00014874 !၁၄,၈၇၄ km2 (၅,၇၄၃ sq mi)
တူရကီ သမ္မတနိုင်ငံ တူရကီ: Türkiye — Türkiye Cumhuriyeti အန်ကာရာမြို့
တူရကီ: Ankara ၇၉,၇၄၉,၄၆၁ 00783562 !၇၈၃,၅၆၂ km2 (၃၀၂,၅၃၅ sq mi)
ထိုင်းလန်း ဘုရင့်နိုင်ငံ ထိုင်း: ประเทศไทย — ราชอาณาจักรไทย (Prathet Thai — Ratcha Anachak Thai) ဘန်ကောက်မြို့
ထိုင်း: กรุงเทพฯ (Krung Thep) ၆၇,၀၉၁,၀၈၉ 00513120 !၅၁၃,၁၂၀ km2 (၁၉၈,၁၁၇ sq mi)
နီပေါ ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရက်တစ် သမ္မတနိုင်ငံ နီပေါ: सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल (Nepāl — Saṁghīya Loktāntrik Ganạ tantra Nepāl) ခတ္တမန္ဒူမြို့
နီပေါ: काठमाडौं (Kāṭhmāḍauṁ) ၂၉,၈၉၀,၆၈၆ 00147181 !၁၄၇,၁၈၁ km2 (၅၆,၈၂၇ sq mi)
ပါကစ္စတန် အစ္စလာမ် သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Pakistan — Islamic Republic of Pakistan
အူရဒူ: پَاکِسْتَان — اسلامی جمہوریہ پاکستان‎ (Pākistān —Islāmī Jamhuriyah-e-Pākistān) အစ္စလာမာဘတ်မြို့
အူရဒူ: اسلام آباد (Islāmābād) ၂၁၀,၄၄၃,၀၀၀ 00796095 !၇၉၆,၀၉၅ km2 (၃၀၇,၃၇၄ sq mi)
ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: Philippines — Republic of the Philippines
တမ်းပလိတ်:Lang-fil ၁၀၀,၉၈၁,၄၃၇ 00343448 !၃၄၃,၄၄၈ km2 (၁၃၂,၆၀၆ sq mi)
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ / Viet Nam
ဗီယက်နမ်ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ်: Việt Nam — Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ဟနွိုင်းမြို့
ဗီယက်နမ်: Hà Nội ၉၁,၅၁၉,၂၈၉ 00332698 !၃၃၂,၆၉၈ km2 (၁၂၈,၄၅၅ sq mi)
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ဘင်္ဂါလီ: বাংলাদেশ — গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (Bānglādesh — Gaṇaprajātantrī Bānglādesh) ဒါကာမြို့
ဘင်္ဂါလီ: ঢাকা (Ḍhākā) ၁၆၁,၀၈၃,၈၀၄ 00143998 !၁၄၇,၅၇၀ km2 (၅၆,၉၇၇ sq mi)
Nation of Brunei, the Abode of Peace အင်္ဂလိပ်: Brunei Darussalam
မလေး: Brunei — Negara Brunei Darussalam ဘန်ဒါဆရီဘဂါဝမ်မြို့
အင်္ဂလိပ်: Bandar Seri Begawan
မလေး: Bandar Seri Begawan ၄၀၈,၇၈၆ 00005765 !၅,၇၆၅ km2 (၂,၂၂၆ sq mi)
ဘာရိန်းဘုရင့်နိုင်ငံ အာရပ်: مملكة البحرين — البحرين (Al Baḩrayn — Mamlakat al Baḩrayn) မာနာမာမြို့
အာရပ်: المنامة (Al Manāmah) ၁,၃၁၆,၅၀၀ 00000760 !၇၆၀ km2 (၂၉၃ sq mi)
ဘူတန် ဘုရင့်နိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-dz (Druk Yul — Druk Gyalkhapb) Thimphu
တမ်းပလိတ်:Lang-dz (Thimphu) ၇၁၆,၈၉၆ 00038394 !၃၈,၃၉၄ km2 (၁၄,၈၂၄ sq mi)
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌ မြန်မာ: မြန်မာ — ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်‌ နေပြည်တော် ၅၄,၅၈၄,၆၅၀ 00676578 !၆၇၆,၅၇၈ km2 (၂၆၁,၂၂၈ sq mi)
မလေးရှားနိုင်ငံ Malaysian: Persekutuan Malaysia ကွာလာလမ်ပူမြို့[d]
မလေး: Kuala Lumpur ၃၀,၅၂၇,၀၀၀ 00329847 !၃၂၉,၈၄၇ km2 (၁၂၇,၃၅၅ sq mi)
မွန်ဂိုးလီးယားနိုင်ငံ မွန်ဂိုးလီးယား: Монгол — Монгол улс (Mongol — Mongol uls) ဦလန်ဘာတာမြို့
မွန်ဂိုးလီးယား: Улаанбаатар (Ulaanbaatar) ၃,၁၇၉,၉၉၇ 01564116 !၁,၅၆၄,၁၁၆ km2 (၆၀၃,၉၀၉ sq mi)
မော်လဒိုက်သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-dv (Dhivehi Raajje — Dhivehi Raajjeyge Jumhooriyyaa) မာလီမြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-dv (Maale) ၃၉၄,၄၅၁ 00000298 !၂၉၈ km2 (၁၁၅ sq mi)
ယီမင်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: اليمن — الجمهورية اليمنية (Al Yaman — Al Jumhūrīyah al Yamanīyah) Sana'a
အာရပ်: صنعاء (Şan‘ā’) ၂၅,၉၅၆,၀၀၀ 00527968 !၅၂၇,၉၆၈ km2 (၂၀၃,၈၅၀ sq mi)
ရုရှား ဖက်ဒရေးရှင်း နိုင်ငံ ရုရှား: Росси́я — Российская Федерация (Rossija — Rossijskaja Federacija) မော်စကိုမြို့
ရုရှား: Москва (Moskva) ၁၄၂,၅၁၇,၆၇၀ 17098242 !၁၇,၀၉၈,၂၄၂ km2 (၆,၆၀၁,၆၆၈ sq mi)
လက်ဘနွန်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: لبنان — الجمهورية اللبنانية (Lubnān — Al Jumhūrīyah al Lubnānīyah) ဘေရွတ်မြို့
အာရပ်: بيروت (Bayrūt) ၄,၁၄၀,၂၈၉ 00010400 !၁၀,၄၀၀ km2 (၄,၀၁၅ sq mi)
လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရတစ်သမ္မတနိုင်ငံတော် လာအို: ປະເທດລາວ — ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (PathetLao — Sathalanalat Paxathipatai Paxaxôn Lao) ဗီယင်ကျန်းမြို့
လာအို: ວຽງຈັນ (Viangchan) ၆,၅၈၆,၂၆၆ 00236800 !၂၃၆,၈၀၀ km2 (၉၁,၄၂၉ sq mi)
သီရိလင်္ကာ ဒီမိုကရက်တစ် ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတနိုင်ငံ သီဟိုဠ်: ශ්‍රී ලංකාව — ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජය (Shrī Laṁkā — Shrī Laṁkā Prajātāntrika Samājavādī Janarajaya)
တမီးလ်: இலங்கை — இலங்கை ஜனநாயக சமத்துவ குடியரசு (Ilaṅkai — Ilaṅkai Jaṉanāyaka Choṣhalichak Kuṭiyarachu) သီရိ ဂျာယာဝါဒန္ဒပူရ ကိုတဲမြို့
သီဟိုဠ်: ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ (Shrī Jayavardhanapura Koṭṭe)
တမီးလ်: ஶ்ரீ ஜெயவர்த்தனபுர கோட்டை (Shrī Jĕyavarttaṉapura Koṭṭai) ၂၁,၄၈၁,၃၃၄ 00065610 !၆၅,၆၁၀ km2 (၂၅,၃၃၂ sq mi)
အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတနိုင်ငံ အင်ဒိုနီးရှား: Indonesia — Republik Indonesia ဂျကာတာမြို့
အင်ဒိုနီးရှား: Jakarta ၂၄၈,၆၄၅,၀၀၈ 01904569 !၁,၉၀၄,၅၆၉ km2 (၇၃၅,၃၅၈ sq mi)
အစ္စရေးနိုင်ငံ ဟီဘရူး: יִשְרָאֵל — מְדִינַת יִשְׂרָאֵל ‎ (Yisra'el — Medinat Yisra'el)
အာရပ်: إسرائيل — دَوْلَة إِسْرَائِيل (Isrā'īl — Dawlat Isrā'īl) ဂျေရုဆလင်မြို့ (Claimed and de facto)[c]
ဟီဘရူး: ירושלים‎ (Yerushalayim) ၇,၅၉၀,၇၅၈ 00020770 !၂၀,၇၇၀ km2 (၈,၀၁၉ sq mi)
အဇာဘိုင်ဂျန် သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-az ဘာကူးမြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-az ၉,၅၉၃,၀၀၀ 00086600 !၈၆,၆၀၀ km2 (၃၃,၄၃၆ sq mi)
အာဖဂန်နစ္စတန် အစ္စလာမ် သမ္မတနိုင်ငံ Dari: جمهوری اسلامی افغانستان — افغانستان (Afghānestān — Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Afghānestān)
တမ်းပလိတ်:Lang-ps (Afghān̄istān — Afghānistān Islāmī Jumhūrīyat) ကဘူးလ်မြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-ps (Kābul) ၂၆,၅၅၆,၈၀၀ 00652230 !၆၅၂,၂၃၀ km2 (၂၅၁,၈၂၇ sq mi)
အာမေးနီးယား သမ္မတနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Hayastan — Hayastani Hanrapetut'yun) ယေရေဗန်မြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Yerevan) ၂,၉၇၀,၄၉၅ 00029743 !၂၉,၇၄၃ km2 (၁၁,၄၈၄ sq mi)
အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ အာရပ်: اﻹﻣﺎرات — دولة الإمارات العربية المتحدة (Al Imārāt — Al Imārāt al ‘Arabīyah al Muttaḩidah) အဘူဒါဘီမြို့
အာရပ်: أبوظبي (Abu Dhabi) ၉,၅၇၇,၀၀၀ 00083600 !၈၃,၆၀၀ km2 (၃၂,၂၇၈ sq mi)
အိန္ဒိယသမ္မတနိုင်ငံ အင်္ဂလိပ်: India — Republic of India
हिन्दी: भारत - भारत गणराज्य နယူးဒေလီမြို့
အင်္ဂလိပ်: New Delhi
हिन्दी: नई दिल्ली ၁,၂၀၅,၀၇၃,၆၁၂ 03287263 !၃,၂၈၇,၂၆၃ km2 (၁,၂၆၉,၂၁၉ sq mi)
အိုမန် ဆူလတန်နိုင်ငံ အာရပ်: عُمان — سلطنة عُمان (‘Umān — Salţanat ‘Umān) မက်စကတ်မြို့
အာရပ်: مسقط (Masqaţ) ၃,၀၉၀,၁၅၀ 00309500 !၃၀၉,၅၀၀ km2 (၁၁၉,၄၉၉ sq mi)
အီဂျစ် အာရပ်သမ္မတနိုင်ငံ[n 1] အာရပ်: مصر — جمهورية مصر العربية (Miṣr—Jumhūrīyat Miṣr al-ʿArabiyya) ကိုင်ရိုမြို့
Arabic: القاهرة (al-Qāhirah) ၉၀,၈၅၀,၀၀၀ 01001449 !၁,၀၀၁,၄၄၉ km2 (၃၈၆,၆၆၂ sq mi)
အီရတ်သမ္မတနိုင်ငံ အာရပ်: العراق — جمهورية العراق (Al ‘Irāq — Jumhūrīyat al ‘Irāq) ဘဂ္ဂဒက်မြို့
အာရပ်: بغداد (Baghdād) ၃၆,၀၀၄,၅၅၂ 00438317 !၄၃၈,၃၁၇ km2 (၁၆၉,၂၃၅ sq mi)
အီရန် အစ္စလာမ်မစ် သမ္မတနိုင်ငံ ပါးရှန်း: جمهوری اسلامی ایران — ایران‎ (Īrān — Jomhūrī-ye Eslāmī-ye Īrān) တီဟီရန်မြို့
ပါးရှန်း: تهران (Tehrān) ၇၈,၈၆၈,၇၁၁ 01648195 !၁,၆၄၈,၁၉၅ km2 (၆၃၆,၃၇၂ sq mi)
ဥဇဘက်ကစ္စတန်သမ္မနိုင်ငံ တမ်းပလိတ်:Lang-uz တရှကင်မြို့
တမ်းပလိတ်:Lang-uz ၃၀,၄၉၂,၈၀၀ 00447400 !၄၄၇,၄၀၀ km2 (၁၇၂,၇၄၂ sq mi)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှုနှင့် ခိုင်မာမှုရှိသော်လည်း ကန့်သတ်မှုရှိသော De-facto နိုင်ငံများ
တရုတ်သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကြေငြာ၍ထားသည်။ အစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကို ၁၆ နိုင်ငံသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် Holy See တို့မှ တရားဝင်အသိအမှတ်ပြု၍ထားသည်။ သို့သော် ထိုင်ဝမ်သည် နိုင်ငံအများစုနှင့် တရားမဝင်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ထားပြီး de-facto အားဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံအများစုမှ အသိအမှတ်ပြုထားပါသည်။ ဤအခြေအနေအား ပိုမိုသိရှိလိုလျှင် ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေးအခြေအနေအား ဆက်လက်ဖတ်ရှုကြည့်နိုင်သည်။ Traditional Chinese: 臺灣/台灣 — 中華民國 (Táiwān — Zhōnghuá Mínguó) ထိုင်ပေမြို့
Traditional Chinese: 臺北/台北 (Táiběi) ၂၃,၀၇၁,၇၇၉ ၃၅,၉၈၀ km2 (၁၃,၈၉၂ sq mi)
ပါလက်စတိုင်းနိုင်ငံ အစ္စရေးနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ် ကြေငြာထားသည်။ ၁၃၇ နိုင်ငံသော ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှအသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင်မဟုတ်သော လေ့လာသူနိုင်ငံဖြစ်သည်။ အာရပ်: فلسطين (Filasṭīn) ဂျေရုဆလင်မြို့ (ကြေငြာထား)
ရာမလာမြို့ (de facto)
အာရပ်: رام الله
၄,၅၅၀,၀၀၀ 004550000 !၆,၂၂၀ km2 (၂,၄၀၂ sq mi)
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အသိအမှတ်ပြုမှု အနည်းငယ် (သို့မဟုတ်) မရှိသော De-facto နိုင်ငံများ
Republic of Abkhazia Claimed as an autonomous republic of Georgia. Recognised by five UN states. တမ်းပလိတ်:Lang-ab (Apswa) Sukhumi / Sukhum
တမ်းပလိတ်:Lang-ab (Akwa) 250,000 ၈,၆၆၀ km2 (၃,၃၄၄ sq mi)
Republic of Artsakh Claimed as part of Azerbaijan. Recognised only by3non-UN states. တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Lernayin Gharabaghi — Lernayin Gharabaghi Hanrapetut’yun) Stepanakert
တမ်းပလိတ်:Lang-hy (Stepanakert) 141,400 ၇,၀၀၀ km2 (၂,၇၀၃ sq mi)
Turkish Republic of Northern Cyprus Claimed as part of the Republic of Cyprus. Recognised only by Turkey. တူရကီ: Kuzey Kıbrıs — Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti North Nicosia
တူရကီ: Lefkoşa 285,356 ၃,၃၅၅ km2 (၁,၂၉၅ sq mi)
Republic of South Ossetia Claimed as part of Georgia. Recognised by five UN states. တမ်းပလိတ်:Lang-os (Khussar Iryston — Respublikæ Khussar Iryston)
ရုရှား: Южная Осетия — Республика Южная Осетия (Yuzhnaya Osetiya — Respublika Yuzhnaya Osetiya) Tskhinvali
တမ်းပလိတ်:Lang-os (Chreba) 70,000 ၃,၉၀၀ km2 (၁,၅၀၆ sq mi)
ကိုကိုး (ကီးလင်း) ကျွန်းများနယ်မြေ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ နယ်မြေ အင်္ဂလိပ်: Cocos (Keeling) Islands — Territory of the Cocos (Keeling) Islands West Island / Bantam ၅၄၄ ၁၄ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၅ စတုရန်းမိုင်)
ခရစ္စမတ်ကျွန်းနယ်မြေ ဩစတြေးလျနိုင်ငံ နယ်မြေ အင်္ဂလိပ်: Christmas Island — Territory of Christmas Island Flying Fish Cove / The Settlement ၁,၈၄၃ ၁၃၅ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၅၂ စတုရန်းမိုင်)
ဗြိတိသျှ အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ နယ်မြေ ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ အင်္ဂလိပ်: British Indian Ocean Territory — ၄,၀၀၀[f] ၅၄,၄၀၀ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၂၁,၀၀၄ စတုရန်းမိုင်)
The Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ အင်္ဂလိပ်: Akrotiri and Dhekelia — Sovereign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia Episkopi Cantonment
အင်္ဂလိပ်: Episkopi Cantonment ၁၅,၇၀၀[e] ၂၅၄ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၉၈ စတုရန်းမိုင်)
မကာအို အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရုတ်: 澳門 — 中華人民共和國澳門特別行政區
ပေါ်တူဂီ: Macau — Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China မကာအို ၅၇၃,၀၀၃ ၂၈.၂ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၁၀.၉ စတုရန်းမိုင်)
ဟောင်ကောင် အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ၏ အထူးအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ တရုတ်: 香港 — 中華人民共和國香港特別行政區
အင်္ဂလိပ်: Hong Kong — Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China အစိုးရတောင်ကုန်း ၇,၁၂၂,၅၀၈ ၁,၁၀၄ စတုရန်း ကီလိုမီတာ (၄၂၆ စတုရန်းမိုင်)
Although the majority of Egypt is in Africa, it could be argued that the Sinai Peninsula is geographicallyapart of Asia.
Field Listing :: Names။ CIA။ 28 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
UNGEGN List of Country Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (2007)။ 28 July 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
List of countries, territories and currencies။ Europa (9 August 2011)။ 10 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Field Listing :: Capital။ CIA။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
UNGEGN World Geographical Names။ United Nations Group of Experts on Geographical Names (29 July 2011)။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Country Comparison :: Population။ CIA (July 2012)။2September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Field Listing :: Area။ CIA။7August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Government Information Office, Republic of China (Tawian)။ Government Information Office, Republic of China (Taiwan)။3April 2005 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 10 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
About Abkhazia။ Abkhazia Ministry of Foreign Affairs။ 14 July 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Abkhazia (autonomous republic, Georgia)။ Encyclopædia Britannica။ 2011-03-03 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Abkhazia presents proof of independence recognition by Vanuatu"၊ RT၊7June 2011။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Regions and territories: Abkhazia"၊ BBC News၊ 8 February 2011။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Country Overview။ Office of the Nagorno Karabakh Republic in the United States။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Regions and territories: Nagorno-Karabakh။ BBC News (20 January 2011)။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Official website of the President of the Nagorno Karabagh Republic။ President.nkr.am။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Nagorno-Karabakh (region, Azerbaijan)။ Encyclopædia Britannica။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"A Mediterranean Quagmire"၊ The Economist၊ 22 April 2010။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi (in Turkish)။ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti။ 2018-03-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Cyprus country profile။ BBC News (27 May 2011)။3August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
DPÖ: "2009 sonu itibarıyla nüfus 285 bin 356"။ Kibris Postasi (8 October 2010)။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"Regions and territories: South Ossetia"၊ BBC News၊ 8 February 2011။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Kafkas Vakfi။ South Ossetia။ Hartford Web Publishing။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Field Listing :: Dependency Status။ CIA။ 8 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Australian Government — Department of Infrastructure and Regional Development။ 2016 Census: Christmas Island။ 10 January 2018 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
British Indian Ocean Territory။ CIA။ 14 August 2011 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
As reflected in the Chinese text of the Macau emblem, the text of the Macao Basic Law Archived5February 2012 at the Wayback Machine., and the Macao Government Website Archived 29 June 2012 at the Wayback Machine., the full name of the territory is the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China. Although the conventions of "Macao Special Administrative Region", "Macao" and "Macau" can also be used.